The Rohingya News Bank : RSO
Showing posts with label RSO. Show all posts
A Myanmar-based Rohingya militant group on Tuesday claimed to have killed 22 Myanmar soldiers inapre-dawn raid on an army post in the western Rakhine state."Today [Tuesday] Rohingya Solidarity Organization (RSO) attacked on Burmese military in the morning between 4.30 a.m. to 7.00 a.m. on 44-BP (Burmese military camp), leading to 22 Casualties among Burmese troops," the group said inastatement accessed by Anadolu Agency.
Labels: 2021, en, News, Rohingya militants, RSO
RSO နှင့် မူဂျာဟစ်ဒင် နောက်ခံသမိုင်း
၁၉၆၁ ခုနှစ် "ရိုဟင်ဂျာ မူဂျာဟစ်"သူပုန်တဦး တပ်မတော်၏ ဒုတိယ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီးထံ လက်နက်ချစဉ်
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တော တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွင် RSO (Rohingya Solidarity Organization) ဆိုသော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၏ အမည်က ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ သို့သော် အစိုးရကမူ RSO ၏ လက်ချက်ဟု အတိအလင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းတော့ မရှိသေးပေ။
Labels: 2016, Article, mm, Operation Monsoon, RSO, မူဂျာဟစ်ဒင်, ဆောင်းပါး
1-RSO Journal Jan 2010
The Arakan News January-201... by on Scribd
Labels: Book, en, Journal, RSO